ကွန်ပျူတာ လက်ဝယ်ရှိသူများ သိသင့်သောအချက်လေးတချို့ ~ Saw Chit Diary
ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဖိုဒါကို အခြားလူ ဖွင့်ကြည့်လို.မရ၊ Delete လုပ်လို.မရအောင်လုပ်ထားမယ်။
ကိုက ပြန်ဖွင့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီဖိုဒါပေါ်မှာ ညာဘက်ကလစ်ပြန်နှိပ် sharing and security ကိုဝင် ပြီးရင် Owner ဆိုတဲ့ Tab ကို သွားပါ။ Administrator ပေါ်မှာ select မှက်ပြီး Reblace owner in subcontainers and objects ဆိုတဲ့ စာကြောင်းမှာ အမှန်ခြစ်လေး ပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ OK ပေါ့။ ဒါဆိုရင်တော့ ပြန်ဝင်လို.ရပါပြီ။
ကိုယ်ဆီမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်လဲရှိတယ်၊ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်လည်း အင်စတော လုပ်ထားရဲ့သားနဲ. GTalk မှာ မြန်မာလိုရိုက်တာ လေးထောင့်ကွပ်တွေ ပေါ်နေရင်။
I.E မှာဆိုရင် Tools Tab ကနေ Internet Option ကိုဝင် General Tab ထဲက Fonts ဆိုတာထဲဝင် Zawgyi-One ဆိုတဲ့ဖောင့်ကို ရွေး။
ခင်ဗျားတို.ရဲ့ မိုက်ကရိုဆော့ဝတ်ဖိုင်တွေ ကိုအွန်လိုင်းက သူငငယ်ချင်းတွေဆီ ပို.ဖူးလား။ ခင်းဗျားက ဥပမာ ရှားရှားပါးပါးဖောင့်တွေနဲ. ရေးထားတယ်ဆိုပါဆို. ခင်းဗျားပိုတဲ့ သူငယချင်းဆီမှာ အဲဒီဖောင့်မျိုး မရှိရင် တဖက်လူက ဖွင့်ရတာ အခက်ကြုံတော့တာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးအခက်မကြုံစေချငဘူးဆိုရင် မိုက်ကရိုဆော့ဝတ်ဖိုင်ထဲမှာ ခင်ဗျားရိုက်ထားသမျှ ဖောင့်တွေနဲ. တွဲပြီးထည့်ပေးလိုက်လို. ရပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် တဖက်လူမှာ ခင်ဗျားရိုက်ထားတဲ့ ဖောင့်မျိုးမရှိလည်း စာကိုဖွင့်ဖက်နိုင်ပါတယ်။
စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားရိုက်ထားတဲ့ မိုက်ကရိုဆော့ဝတ် ဖိုင်ကိုဖွင့် Save as လုပ်။ Save as Box ကျလာရင် အဲဒီဘောက်စ် လေးရဲ့ ညာဘက် Title ဘားအောက်မှာ Tools ဘေးကမျှားလေးကိုဖွင့် Save Option ကိုကလစ်လုပ် Box တစ်ခုထပ်ကျလာရင် Embed True Type Fonts ဆိုတဲ့နေရာမှာကော၊ Embed characters in use only ဆိုတဲ့နေရာမှာကော ချက်ဘောက်လေးတွေကို အမှန်ခြစ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ OK ပေါ့။ ပြီးရင်တော့ ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာသိမ်း။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီမိုက်ကရိုဆော့ဝတ် ဖိုင်လေးကို ဖောင့်မရှိလည်း ဖွင့်ဖက်နိုင်သွားပါပြီ။
မိမိတို့၏ CBOX အောက်တွင် မြန်မာကီးဘုတ်ထည့်သွင်းနည်း..
ဤ မြန်မာစာ အယ်ဒီတာအား GreyWyvern ၀ဘ်ဆိုက်မှ ရရှိသော
Open source java script(keyboard.js) နှင့် Windows Charmap မှ ရရှိသော unicode character number(က=u1000 စသည်ဖြင့် ) ကို
Myanmar_Zawgyi layout အဖြစ် ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါသည်။ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုပါ ၎င်းဝဘ်ဆိုက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း။
၁။ အောက်ပါလိုင်းများအား wordpress theme ၏ header.php တွင် ရှိသော
သို့မဟုတ် meta tag တွေရဲ့
ိ ၂။ အောက်ပါလိုင်းများအား wordpress theme ၏ sidebar.php or အခြား php file တွင်ရှိသော (CBOX ရှိပါက) အောက်မှာ ဆက်ထည့်ပါ.
လိုအပ်ပါက Shift ကို